January 11, 2022 - ApannPyay Media
ချက်ပြုတ်ဖို့တင်မဟုတ်ဘဲ သင်မသိသေးတဲ့ ဆားရဲ့ အသုံးဝင်ပုံ ၁၄ မျိုး
January 11, 2022 by ApannPyay Media
ချက်ပြုတ်ဖို့တင်မဟုတ်ဘဲ သင်မသိသေးတဲ့ ဆားရဲ့ အသုံးဝင်ပုံ ၁၄ မျိုး ဆားကို နှစ်ပေါင်း ၆၀၀၀ကျော်လောက်ထဲက ကောင်းစွာအသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ်။ အစားအစာတွေ ချက်ပြုတ်ဖို့အတွက် အစားအစာအမျိုးမျိုးကို ထိန်းသိမ်းဖို့အတွက်၊ မီးလောင်မှုကို ထိန်းချုပ်ဖို့နဲ့ လျော့ချဖို့အတွက် စတဲ့အခြေအနေအမျိုးမျိုးအတွက် ကျယ်ပြန့်စွာ အသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ်။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းက အစားအစာတွေကို ဘာ့ကြောင့် သယ်ယူပို့ဆောင်နိုင်သလဲဆိုတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းများထဲက တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဆားက နေရာတိုင်းနီးပါးရနိုင်ပြီး ဈေးပေါပါတယ်။ ဆားကို ဒီထက်ပိုပြီး ဘယ်လိုနည်းလမ်းတွေနဲ့ အသုံးပြုလို့ရသေးသလဲဆိုတာ ကြည့်လိုက်ရအောင်။ ၁။ အဝတ်ဟောင်းတွေကို အရောင်ပြန်တင်တဲ့အခါအရောင်လွှင့်နေတဲ့ အဝတ်ဟောင်းတွေကို အသစ်လိုတောက်ပသွားအောင် ဆားနဲ့ စမ်းကြည့်နိုင်ပါတယ်။ ဆား ၄ပုံ၁ပုံထည့်ထားတဲ့ ဆားရည်တစ်ခွက်ထဲမှာ သင်အဝတ်တွေကို စိမ်ပါ။ လျှော်ပြီးသွားရင် ရလဒ်တွေက အံသြစရာဖြစ်လာမှာပါ။ ၂။ ပန်းတုတွေကို သန့်ရှင်းရေးလုပ်တဲ့အခါ ပလတ်စတစ်အလှပန်းတွေက ကြာကြာထားရင် ဖုန်တွေတတ်လာတတ်ပါတယ်။ ဒီပန်းအတုတွေကို … Read more
ကြေးစည် တီးရခြင်း အကြောင်းရင်းက ဘာကို ရည်ညွှန်းတာလဲ
ကြေးစည် တီးရခြင်း အကြောင်းရင်းက ဘာကို ရည်ညွှန်းတာလဲ “ကြေးစည်” ဘာကြောင့်တီးရသလဲ ?” “ကျေးဇူးတော်ရှင် မဟာဗောဓိမြိုင်ဆရာတော်ဘုရားကြီး”ဟာ “ရှမ်းပြည်နယ်,သံလွင်မြစ် အရှေ့ခြမ်း” “သုဝဏ္ဏသျှမ်တောင်”မှ “ကန့်ဘလူမြို့နယ်၊”နတ်တလူတောရ”သို့ “(၁၉၉၇)ခုနှစ်၊ဇွန်လ”ထဲမှာ ပြောင်းကြွသီတင်းသုံးတော်မူခဲ့ပါတယ်။ “နတ်တလူတောရ”ဟာ “ကန့်ဘလူမြို့နယ်”ထဲမှာ ပါဝင်ပေမယ့် “ဇီးကုန်း၊ထန်းတပင်မြို့”များနဲ့ ပိုနီးပါတယ်။ “ရွှေဘိုမြို့” ကြီးက တစ်ဆင့်သွားရင်လည်း သွားရလွယ်ပါတယ်။ “နတ်တလူတောရ”ဟာ “ဆရာတော်ဘုရားကြီး”ရဲ့ ဖွားရာဇာတိ “မင်းကုန်းရွာ”ရဲ့အရှေ့ဘက်”နှစ်မိုင်ကျော်”လောက်မှာ ရှိပါတယ်။ “ဇာတိမြေ”ဆီ ပြန်ကြွ”သာသနာပြုတယ်”လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ “ဆရာတော်ဘုရားကြီး”ဟာ ရောက်လေရာ တောရများမှာ”ဆွမ်းခံတဲ့အကျင့်”ရှိခဲ့တဲ့အတိုင်း “နတ်တလူတောရ”သို့ ကြွရောက်စဉ်မှာပင် ပတ်ဝန်းကျင်ဂေါစဂါမ်ရွာများမှာ “ဆွမ်းခံကြွ”တော်မူ ပါတယ်။ “ဆရာတော်ဘုရားကြီး”-“နတ်တလူတောရ”ကို ပြောင်းကြွလာတဲ့ သတင်းကြားတာနဲ့ ရပ်ဝေးက လိုက်လာတဲ့ တပည့်သာဝကတွေလည်း “ဆရာတော်ဘုရားကြီး”ချွေး မတိတ်မီ အလုအယက် ဖူးမြော်ကြပါတယ်။ “ဆရာတော်ဘုရားကြီး”က”မေတ္တာပြုံး”ဖြင့် အားလုံးကို နှုတ်ဆက်ပြောဟောနေစဉ်… “ဆရာတော်ဘုရား… ဆွမ်းခံကြွတာ … Read more
အရေးပေါ် ကားဘရိတ်ပေါက်သွားရင် ဘာလုပ်သင့်လဲ
အရေးပေါ် ကားဘရိတ်ပေါက်သွားရင် ဘာလုပ်သင့်လဲ? ကားစတီယာရင် ကို ကိုင်နေတဲ့ လူတိုင်းသိထားသင့်တဲ့ အချက်လေးတွေ ဖြစ်လို့ ပြန်လည်မျှဝေပေးချင်ပါတယ်။ အခြေခံအားဖြင့်တော့ ကား မှာ ပုံမှန် ဘီးလေးဘီး စလုံးအလုပ်လုပ်တဲ့a- Hydraulic Brake – ဘရိတ်ဆီ Fluid Pressure နဲ့ ကားဘီးလေးဘီးကို ထိန်းချူပ်ပါတယ်။b- Electromagnetic Brake – Electric Motor နဲ့ ကားကို ထိန်းချူပ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် Fuel + Battery Hybrid Car တွေမှာပါပါတယ်။c- Servo Brake – Vacuum Pressure နဲ့ ကားဘီးလေးဘီးကို ထိန်းချူပ်ပါတယ်။ အစရှိတဲ့ ဘရိတ် စနစ် တွေထဲက တစ်ခုခု ပါပါတယ်။ တကယ်လို့များ … Read more
၁၉ လမ်းထိပ်မှာ တနေကုန် ထိုင်ရောင်းလို့ ဈေးဦးမပေါက်ဘဲ ဖြစ်နေတဲ့ အဘွားရဲ့ မျိုးစေ့ဆိုင်လေး
January 11, 2022 January 11, 2022 by ApannPyay Media
၁၉ လမ်းထိပ်မှာ တနေကုန် ထိုင်ရောင်းလို့ ဈေးဦးမပေါက်ဘဲ ဖြစ်နေတဲ့ အဘွားရဲ့ မျိုးစေ့ဆိုင်လေး အဖွား ရောင်းရရဲ့လား လို့ မေးကြည့်တော့..” သားရေ မရောင်းရတာကြာလှပေါ့။ မင်းအရှေ့မှာ မြင်တဲ့အတိုင်းပဲ မျိုးစေ့အထုတ်တွေက ပုံနေတာသာကြည့်ပါ။ ဒီအချိန်မှာ ဒီလိုပဲ ဝမ်းရေးက မလွယ်ဘူး သားရေ” လို့ ပြောပြပါတယ်။ သီးပင်စားပင် စိုက်ရတာ ဝါသနာပါသူတွေအနေနဲ့ အဖွားဆိုင်လေးက မျိုးစေ့လေးတွေ လမ်းကြုံရင် ဝယ်ယူအားပေးကြပါလို့ လမ်းညွှန် ချင်ပါတယ်။ လီလီ ပန်းပင် မျိုးဥ တွေလည်း ရပါတယ်။ တစ်ဥ ကို ၅၀၀ ကျပ်ပါ။ သီးပင် စားပင် မျိုးစေ့ထုတ်လေးတွေကတော့ ၂၀၀ ကျပ် အထုတ်လေးတွေကနေ ၁၀၀၀ ကျပ်အထိ အစားစားရှိကြောင်းသိရပါတယ်။ ယခုလိုကာလမျိုးမှာ ဆိုင်ကြီးတွေတောင် ငုတ်တုပ်ထိုင်နေရတဲ့ … Read more
သိန်းထောင်ချီ တန်ဖိုး ရှိတဲ့ ရေဆင်အကြောင်း သိကောင်းစရာ (ရေဆင် ရရင် ထီပေါက်စရာ မလိုတော့ပါ)
သိန်းထောင်ချီ တန်ဖိုး ရှိတဲ့ ရေဆင်အကြောင်း သိကောင်းစရာ (ရေဆင် ရရင် ထီပေါက်စရာ မလိုတော့ပါ) ဆင်သမားတစ်ယောက် ဆင်စီးရင်း ချောင်းနိမ့်တစ်ခုကိုဖြတ်ရာတွင် ဒုက္ခနှင့် လှလှ တွေ့နေသည်။ ဆင်ကိုချွန်းနှင့်ဘယ်လို ဆွဆွ၊ ပါးစပ်မှအော်ပြီးဘယ်လို လှန့်လှန့် ဆင်က ချောင်းကိုမဖြတ်၊ ချောင်းစပ်တွင်သာရပ်၍ တဝူးဝူးအော်နေသည်။ ဘာကြောင့်ပါလိမ့်… မြန်မာနိုင်ငံ အထက်ပိုင်း ကချင်ပြည်နယ်တဝိုက်နှင့် ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်း သစ်တောနယ်မြေတချို့တဝက်တွင် ဆင်သမားများ(ဆင်စခန်းတွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်သူများ၊ ဆင်ဦးစီးများ)အကြား အပြောများတဲ့ ဒဏ္ဍာရီဆန်ဆန် သတ္တဝါတစ်မျိုးရှိပါတယ်။ ထိုသတ္တဝါဟာ ကြီးကြီးမားမားအကောင်မျိုးမဟုတ်တဲ့အပြင် အသွင်သဏ္ဍာန်မှာ ချစ်စရာပင်ကောင်းပါသေးတယ်။ ဒါပေမဲ့လျှော့တွက်လို့မရပါ။ ပါးစပ်ရာဇဝင်တွေအရ ဒီအကောင်ကြောင့်လူသေမှုများရှိခဲ့တဲ့အပြင် ဆင်တစ်ကောင်လုံးကိုပါ တုန်းခနဲလဲသွားစေနိုင်လောက်အောင် အဆိပ်ပြင်းပါတယ်တဲ့။ အထူးဆန်းဆုံးအချက်က သူတို့ဟာ ကုန်းသတ္တဝါတွေထဲမှာ အကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ဆင်တွေနဲ့ တထေရာတည်းတူပြီး လက်တဆုပ်သာသာအရွယ်အစားပဲ ရှိပါတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ သူတို့ကတော့အများက ရေဆင်လို့သိကြတဲ့ ချစ်စရာ … Read more
ရန်ကုန်မြို့က လူတွေ နေ့စဉ် အကြိုက်စားနေကြတဲ့ အကင်တွေကို ဘာအသားတွေနဲ့ လုပ်ထားတာလဲ?
ရန်ကုန်မြို့က လူတွေ နေ့စဉ် အကြိုက်စားနေကြတဲ့ အကင်တွေကို ဘာအသားတွေနဲ့ လုပ်ထားတာလဲ? အမည်တပ်မရသော အသားစုံသံသရာ ကြည့်မြင်တိုင် ကမ်းနားဟု ဆိုလိုက်လျှင် ညစျေးနှင့် ငါးစျေးကို ပြေးမြင်မိ ကြပေလိမ့်မည်။ ထိုမျှသာမကပါ ကြွက်မုဆိုးတို့ စံရာလည်း ဖြစ်နေတတ်သေးသည်။ ရန်ကုန်မြို့တော် စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီမှ နေ့စားကြွက်မုဆိုးတစ်ဦး ဖြစ်သော အသက် ၃၀ အရွယ် ကိုသိန်းမျိုးခိုင်၏ စားကျက်သည် ကြည့်မြင်တိုင်ပင် ဖြစ်သည်။ ဇူလိုင်မိုးထုအကြား ညဥ့်နက်နက်တွင် ကြည့်မြင်တိုင် စံပြစျေးအတွင်းမှ စားကြွင်းစားကျန်၊ ကုန်ကြွင်းကုန်ကျန် များကို စားသုံးကာ ဝဖီးနေသော မြေကြွက်ကြီးများအား လိုက်လံ ရှာဖွေနေသူများ ခပ်ဖွဲဖွဲ ရှိနေကြသည်။ “ဒါတောင်မိုးတွင်းမို့လို့ ကြွက်ထိုးတဲ့လူ နည်းတာ။ နွေရာသီဆို ဒီထက်များတယ်” ဟု ကိုသိန်းမျိုးခိုင်က ဆိုသည်။ ညဥ့်နက်နက် … Read more
ရန်ကုန်သားတွေ အခုထိ မခွဲခြားတတ်သေးတဲ့ ထပ်တရာနဲ့ ပလာတာအကြောင်း ရှင်းလင်းချက်
ရန်ကုန်သားတွေ အခုထိ မခွဲခြားတတ်သေးတဲ့ ထပ်တရာနဲ့ ပလာတာအကြောင်း ရှင်းလင်းချက် အခေါ်တွေက ရှုပ်လို့ ဒုတ်ထမ်းငြင်းဖို့ ဂျုံနဲ့ လုပ်တာ ပလာတာ၊ ထပ်တရာ၊ ပူရီ(ပူတီ)၊ နံပြား၊ အီကြာကွေး ထပ်တရာ ဂျုံကို နှပ်၊ အပြားအကြီးကြီး ဖြစ်အောင်ရိုက်၊ (ဆီသုတ်ရိုက်တာ) ပြီးရင် အပြားကြီးကို ရှည်ရှည်လေး ဖြစ်အောင်လိပ်၊ လိပ်ပြီးသားကို ခွေ၊ ခွေထားတာကိုမှ ပြားပြားလေး ဖြစ်အောင် ထုပြီး ဆီနဲ့ကြော်တော့ အထဲမှာ အထပ်လေးတွေ ဖြစ်သွား၊ အဲဒါ စားတော်ပဲနဲ့စားစား ၊ ပဲဟင်း၊ အာလူးဟင်း၊ ကြက်သားဟင်း၊ ဆိတ်သားဟင်းစတဲ့ ဟင်းတွေနဲ့စားစား အဲဒါ ထပ်တရာ ပလာတာ စောစောက ရိုက်တာကို ပြန်မခွေပဲ ပြားလိုက် ဆီနဲ့ကြော်၊ ပြီးရင် ဓားနဲ့ခုတ်၊ စားတော်ပဲနဲ့ဖြစ်ဖြစ် … Read more
ကြွက်နို့ များကို မနာမကျင်ပဲ လက်တွေ့ပျောက်ခဲ့တဲ့ နည်း ကြွက်နို့၏ သဘောသဘာဝမှာ တစ်ကိုယ်ရည်သန့်ရှင်းမှုအပေါ် ဂရုစိုက်မှုနည်းပါး၍ လက်ခြေထောက်၊ ခန္ဓာကိုယ်အရေပြားတို့ပေါ်တွင် ပေါက်လေ့ ရှိပြီး ပျောက် ကင်းအောင် ကုသရန် ခက်ခဲလှပါသည်။ငွေကြေးတတ်နိုင်သူတို့ကကြွက်နို့ကို မီးရှို့သောနည်းဖြင့် ကုကြသည်။ အဆင်ပြေလှသည်မရှိပါ။အချို့မှာမူ ဓားဖြင့်လှီးဖြတ်၍ သွေးသံရဲရဲဖြစ်ကာ တခြားဝေဒနာတွေ ဝင်ရောက်ခြင်းကိုပင် ခံစားရသည်။အချို့ က လည်း လမ်းညွှန်သူများ၏ စကားကို နားယောင်လျက် လမ်းဘေး ပလက်ဖောင်းပေါ်၌ ကြွက်နို့ကို ကုဖြတ်ကာ ဆေး ထည့်ပေးသည့် ထံသွားရောက်ပြီး ကုသမှုခံယူကြပြန်သည်။ ပေါ့စေလို၍ ကြောင်ရုပ်ထိုးကာမှ ဆေးအတွက်နှင့် လေး ကြရသောအဖြစ်များကား မရေမတွက်နိုင်။သို့ဆိုလျှင် ကြွက်နို့တည်းဟူသော အရေပြားရောဂါဝေဒနာ အမြန်ဆုံး သက်သာပျောက်ကင်းသွားစေဖို့ မည်သို့သောမြန်မာဆေးမြီးတိုနှင့် ကုသရပါမည်နည်း။ ကြောင်လျှာပင်ရှိလျှင် အဆင်ပြေပြီဟုသာ မှတ်ယူလိုက်ပါတော့။ ကြောင်လျှာပင်မှ အခေါက်ကို … Read more
ကားထဲမှာရှိနေတဲ့ ရေသန့်ဗူး တစ်ဗူးက သင့်အသက်ကို နှုတ်ယူနိုင်တယ်ဆိုတာ သတိထားမိရဲ့လား
ကားထဲမှာရှိနေတဲ့ ရေသန့်ဗူး တစ်ဗူးက သင့်အသက်ကို နှုတ်ယူနိုင်တယ်ဆိုတာ သတိထားမိရဲ့လား မည်သည့်ကားပိုင်ရှင်မဆို အနည်းဆုံး ရေသန့်ဗူးတစ်ဗူးလောက်တော့ ကားထဲမှာ ဆောင်ထားတတ်ကြပါလိမ့်မယ်။ သီးသန့်ဆောင်ထားတာမျိုးမဟုတ်ရင်တောင် တစ်ကြိမ်တစ်ခါက အသုံးပြုခဲ့ပြီးနောက် လွှင့်ပစ်ဖို့မေ့နေတတ်တဲ့ ရေသန့်ဗူး၊ အချိုရည်ဗူးတွေလည်း ကားထဲမှာ တစ်နည်းနည်းနဲ့ ရှိနေတတ်ပါတယ်။ ဒီဗူးတွေဟာ အပူလွန်ပြီး မပေါက်ကွဲတတ်သော်ငြားလည်း သင့်ရဲ့အသက်ကို ဆုံးရှုံးနိုင်ပါသေးတယ်။ ပြဿနာက ဒီလိုဗူးတွေကို ကားထဲမှာ စနစ်တကျ မထားပဲ အဆင်ပြေသလို ဟိုတင် သည်တင်ထားလိုက်တာက အကြောင်းရင်းခံဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ကားမောင်သူဘက်အခြမ်းမှာ ရေဗူးတွေ၊ အချိုရည်ဗူးတွေ ရှိမနေတာ အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဗူးတွေဟာ ကားမောင်းနေစဉ် ကိုယ်သတိမထားမိလိုက်တဲ့ အချိန်မှာ တစ်နည်းနဲ့နဲ့ အောက်ကို ပြုတ်ကျပြီး ဘရိတ်ခြေနင်းအောက်ကို ရောက်သွားတတ်ပါတယ်။ အရေးပေါ်အခြေအနေတစ်ခုကြုံပြီး ဘရိတ်နင်းတဲ့အခါ ဗူးက အောက်ကနေခံနေတာကြောင့် ဘရိတ်နင်းလို့မရပဲ မတော်တဆမှုဖြစ်ပြီး … Read more
ကံကောင်းချင်လာပြီဆိုရင် ဘယ်လိုတွေ ကြုံလာရနိုင်လဲ
ကံကောင်းချင်လာပြီဆိုရင် ဘယ်လိုတွေ ကြုံလာရနိုင်လဲ လူတစ်ယောက် ကံကောင်းချင်လာပြီဆိုရင် ဒီလိုတွေဖြစ်လာလိ်မ့်မယ်… လူတစ်ယောက်သည် ကံကောင်းချင်လာပြီဆိုလျှင် စိတ်တည်ငြိမ်လာခြင်း၊ စိတ်ရှုပ်ထွေးမှုကင်းကာ စိတ်များကြည်လင် လန်းဆန်းလာခြင်းစသော လက္ခဏာများ ဖြစ်ပေါ်လာလေ့ ရှိကြပါသည် …။ ၎င်းစိတ်ကို ယေဘုယျအားဖြင့် ကောင်းစိတ်ဟု သတ်မှတ်နိုင်ပါပေသည် … ထိုစိတ်မျိုး ဝင်လာလျှင် ‘ငါတော့ ကံကောင်းတော့မယ်၊ ဒီစိတ်ဟာ ကောင်း ကံပြုလုပ်ဖြစ်ဖို့ အကြောင်းခံ စိတ်ပေပဲ’ ဟု သဘောထားကာ ထိုစိတ်ကို ပျောက်ပျက် မသွားရအောင် ထိန်းထားပြီး ကောင်းမှုတစ်ခုခုကို ပြုလုပ်ဖြစ်အောင်သာ ကြိုးစား လုပ်ဆောင်ယူရမည်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် အများဆုံး ပြုလုပ်ဖြစ်လေ့ ရှိသည့် လေ့ကျင့်နေစရာ အထူးမလိုသော သမားရိုးကျ မကောင်းကံဘက်သို့ ပြန်ပြောင်း နောက်ကြောင်းပြန် မလှည့်မိစေရန်လည်း အထူးသတိထားရန် လိုအပ်ပါသည်။ လှူချင်တန်းချင်စိတ် ပေါ်လာလျှင် … Read more